WARBIXIN+XOG: Loolanka Xildhibaanada Puntland oo meel adag gaaray, Gaas iyo Camay oo lug kuleh & Lacag gaaraysa Boqolaal Kun oo la adeegsaday. – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES)- Loolan adag oo xagga xildhibaanada Puntland ah ayaa ka socda mandiqada, waxaana ilaa hadda loolanka ugu badan uu ka socdaa gobaladda Barri, Nugaal & Mudug oo ay rag iyo gabdho badan ku tartamayaan sidii ay u noqon lahaayeen cidda beelahooda matalaysa doorkan baarlamaanka mandiqadaas.
Si weyn ayaa isha loogu hayaa Isbedelada iyo arrimaha Xildhibaan-raadinta ah ee ay wadaan dhinacyo kala duwan oo adeegsanaya wax kasta oo ay awoodaan, ayna ku jiraan in badan oo kamid ah taageerayaasha musharaxiinta Madaxweyne-nimada Puntland.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in Madaxweynaha & Kuxigeenkiisu ay door muuqda ku leeyihiin shaqsiyaadka loo sharaxay in ay kuraasta baarlamaanka ka helaan gobalada kala duwan, taas oo muujinaysa in ay leeyihiin han siyaasadeed oo ku aadan hoggaaminta Puntland mar kale.
Gobalka Mudug, xubnaha doonaya kuraasta Xildhibaanada waxaa ku jira xubno katirsan Madaxtooyada Puntland, isla markaasna aad ugu dhaw Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, kuwaas oo hadda raadinaya in ay golaha baarlamaanka soo galaan.
Dadka siyaasadda la socda ayaa talaabadaas ku sifeeyey mid ay ka dambeyso Madaxtooyada oo doonaysa in ay saameyn ku yeelato inta badan Xildhibaanada baarlamaanka cusub ee kaimaanaya gobalka Mudug, waxaana loolanka ugu adag ka taagan yahay kuraasta gobalkaas.
Madaxweynaha Puntland wali ma shaacin in uu yahay musharax u taagan markale jagadan, balse xogo hoose oo laga helayo ayaa sheegaya in uu wali kala dooranaya qaabka doorashada uu u galayo, xili ay wali ku taagan tahay mid kamid taariikhaha ka raacay mudadii Hoggaamintiisa Puntland.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland CabdiXakiim Cumar Camey oo kas oo jeeda gobalada Sool & Cayn ayaa doonaya in uu saameyn dhameystiran ku yeesho Liiska xildhibaanada gobaladaas ee 17-ka ah, waxaana uu hadda saameyn muuqata ku leeyahay xildhibaanada gobalka Cayn ama Hawd ka imaanaya oo tiro ahaan gaaraya 7 xubnood.
Sidaas oo kale gudaha beeshiisa ayuu kala kulmayaa loolan adag oo kujiheysan xilkiisa, xili ay xiisad ka taagan Tukaraq oo maamulkiisa lagu eedaynayo in ay ku fashilmaan iskadaa xoreynt Laascaanood in ay dib u qabsadaan deegaankaas Tukaraq oo ay Somaliland la wareegtay bilowgii sannadkan sii dhamaadka ah.
Xog uu helay Warsidaha Puntlandtimes.com waxay cadeynaysaa in Boqolaal Kun oo Dollar loo adeegsanayo sidii qof kasta u heli lahaa Xildhibaan uu ku kalsoon yahay, waana midda keentay in ay dad badan isku sharaxaan kursiga qabaa’ilka, waxaana saxiixa Isimadda la rumeyan yahay in ay noqon doonaan wax adag oo lacag badan ku bixi doonto.
Musharaxiinta gudaha kusugan qaarkood ayaa sidaas oo kale saameyn ku leh arrimaha xulida Xildhibaanada golaha cusub, waxaana aan yareyn sheekada ku saabsan in ay lacago bixiyeen si ay taageerayashoodu u soo noqdaan Mudanayaal baarlamaan.
Puntland ayey ka socotaa loolanka doorashada Madaxtinimada, waxaana meel sare gaaray lacagaha la adeegsanayo, taas oo muujinaysa Musuqmasuqa lagu raadinayo kuraasta matalaadda Shacabka, waxaana Shacabku ay welwel ka qabaan Xildhibaan lacag kusoo baxay sidda uu hadhaw ula xisaabtami doono Madaxda dawladda uu dooran doono, isagoo laftirkiisu lacag ku bedelan doona codkiisa.
Doorashada 2019-ka ayaa ka xiiso badan tii dhacday 2014-kii, waxaana muuqata in loolankan ay qeyb ka yihiin musharaxiin badan, waxaana ilaa hadda la og yahay in ay doorashadu ka go`an tahay musharaxiin tiro yar oo doonaya in ay isbedel dhameystiran ka hirgalayaan gudaha dalka, kaas oo ay sheegen in looga guurayo Musuqmaasuqii hareeyey dalka.